OMG! भर्खरै बैतडीबाट अायो भयानक दुर्घटनाका दुःखद खबर, ४ जना… – PathivaraOnline
Home > समाचार > OMG! भर्खरै बैतडीबाट अायो भयानक दुर्घटनाका दुःखद खबर, ४ जना…
असोज ०१, बैतडी । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका ६ को दुदिलाखानमा जिप दुर्घटना हुँदा ४ जाना घाइते भएका छन् । खोडपेदेखि बझाङ बित्थडका लागि छुटेको से १ ज ५८४ नम्बरको जिप दुदिलाखान मोडमा आइतबार राति करिब ८ बजे दुर्घटना हुँदा ४ जना घाइते भएका हुन् । घाइते हुनेमा पाटन नगरपालिका वडा नम्बर ९ का राजेन्द्र बिजले, सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का जनक बिष्ट, सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का जगदिश पन्त र सोही ठाउँ बस्ने कुरुणकर जोसी रहेको जनाइएकाे छ ।
खोडपे प्रहरी चौकी बैतडीका प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्णभान चौधरीले जानकारी दिए । घाइते चारै जनाको उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरमा उपचार भइरहेको छ । गाडीमा चालक सहित ५ जना थिए । चालक महेश पन्त भने फरार छन् । जिप सडकबाट करिब १५० मिटर तल खसेको छ । तर, दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको चौधरीले बताए । -सुनिता भट्टबाट INFO KHABAR
भागरथी प्रकरणमा दिनेशले फोनमै भने – मैले आफ्नै दिदीलाई कहाँ त्यस्तो गर्न सक्छु र ?